KULANKII - HOLLAND
Somali Center for Development Research waxay soo bandhigaysaa
MAALINTA DEGAANKA ADDUUNKA IYO SUNTA SOOMAALIYA
WARBIXIN SHIR-CILMIYEED KA DHACAY HOLLAND 4/6/2005
English version.. Click here
Maalintii Sabtida ee taariikhdu ahayad 4/06/2005, kuna beegnayd maalin ka hor taariikhda adduunka looga dabbaaldego arrimaha degaanka la xiriira, ayaa waxaa la isugu yimid xarunta shirarka ee Hoog Barabant ee ku taal bartamaha magaaalada Utrecht ee dalka Holland shir-cilmiyeed loogu ballansanaa in lagu lafo-guro mid ka mid ah dhibaatooyinka ugu waaweyn ee manta soo waajahay bey’ada Soomaaliyeed, taasoo la xiriirta Sunta aadka halista u ah ee dunida warshadaha horay uga martay ay si arxan-darro iyo axmaqnimaba leh ugu daabulaysay Dalka Soomaaliyeed tobanaankii sano ee ugu dambeeyey, suntaasoo si aad ah loogu shubay berriga iyo badahaba.
Urur cilmi-baariseed oo ay asaaseen qaar ka mid ah oonyahanaka Soomaaliyeed oo dhawaan laga yagleelay dalka Holland lana yiraahdo Somali Center for Development Research (SCDR) ayaa shir-cilmiyeedkaas isku soo dubbariday iyagoo la kaashanaya urur kale oo Soomaaliyeed oo isla dalka Holland ka hawlgala lana yiraahdo African Sky. Shir-cilmiyeedkaas oo ciwaankiisu ahaa “The Export of Toxic Wastes from Western Countries to Africa: The Case of Somalia”, waxaa ka soo qaybgalay marti sharaf badan oo u badnaa dadweynaha Soomaaliyeed oo ku dhaqan dalka Holland, aqoonyahanno, Ururrada Jaaliyadda Soomaalida iyo kuwa Afrikada kale ee halkaas ka hawlgala. Waxaa kaloo joogey qaar ka mid ah warbaahinta Soomaalida.
Kulanka ayaa waxaa ugu horrayn furtay Istarliin Ismaaciil Huguf oo ka socotay African Sky oo soo dhaweysay marti sharaftii una sheegtay ujeeddada looga gol lahaa shirka iyo sida jadwalkiisaba. Intaa kadib waxay ku soo dhaweysay Bashir Sheikh Mohamed oo ka socday hay’adda SCDR oo soo diyaariyey soona bandhigay seminarka. Seminar-ka oo socday muddo saacad iyo bar ah, intaan su’aalaha iyo dood-wadaaggu bilaban, ayaa macluumaadkii lagu soo bandhigay waxaa loo kala qaybin karey labo qaybood oo kala ah mid guud oo diiradda saarayey dhibka Sunta halistaa asalkiisa iyo waxa keenay iyo waxyaalaha sahlaya in loo waarido Dunida saddexaad iyo Afrika. Qaybta labaad ayaa iyadu si toos ah u abbaaraysay sida aafadani u saamaysay Soomaaliya. Qodobbada shir-cilmiyeedku iftiimiyey ayaa waxaa ka mi ahaa:
Guud ahaan dhibaatooyinka degaanka Soomaalida haysta, ha noqdeen kuwo dabiici ah ama kuwa ka falmay dhaqanka aadanaha (man-made problems);
Asalka ama halka uu ka soo jeedo dhibta Sunta Halistaa (Hazardous Wastes) iyo halaka eelku ka soo unkamay;
Macnaha Sunta Halistaa, waxay ka koobantahay iyo astaameheeda;
Dhibaatooyinka caafimaad, deegaan iyo dhaqaale ee ay keeni karto waqtiga dhaw iyo kan dheer-ba;
Duruufaha keenay in Suntan Halistaa loo waarido wadamada siyaasad ahaan, dhaqaale ahaan iyo wacyi ahaan-ba looga horreeyo sida Soomaaliya marka laga eego dhanka danaha dalalka Suntan soo saara;
Duruufaha fududeeya ama dhiirrigeliya in Dunida Saddexaad ee dhibkan loo waaridaa ay aad ugu adkaato inay iska difaacaan;
Duruufo kale oo caalami ah oo labada qoloba (dhoofiyayasha iyo loo-dhoofiyayaasha) ka madax banaan arrintana aad uga qaybqaata;
Shuruucda iyo Qawaaniinta caalamiga ah ee adduunyadu isku waafaqday looguna talogalay inay arrimahan xakameeyaan heer kasta ama xaaraantinamaynayaba;
Khiyaanooyinka kala duwan ee loo adeegsado waaridda Sunta Halista ah;
Sida arrinta Suntani u saamaysay guud ahaan qaaradda Africa, tusaalayaal taas la xiriira iyo sidii qaarkood loo xalliyey;
Xaqiiqooyinka la xiriira sida suntu u saamaysay Soomaaliya, ilaha laga helay xogtaas iyo taariikh ahaan, inta la ogyahay, siday arrintu u soo jiitantay laga soo bilaabo bilowgii sideetanaadkii ilaa maanta iyo bad-gariirkii Tsunami-ga;
Tusaalayaal la xiriira Mashruucyo khaas ah oo dibedaha laga maleegay oo ujeedadodu ahayd sidii suntaas Soomaaliya loogu waaridi lahaa;
Iyo xiriirka dhow ee ka dhexeeya arrimahan, hubka loo dhoofiyo Somalia, qalalaasaha siyaasadeed, Qaran la’aanta iyo colaadda sokeeye ee laga hurinayey Soomaaliya tobanaankii sano ee ugu dambeeyey.
Waxaa kale oo shir-cilmiyeekaas hoosta looga xarriiqay sida aysan arrintani ku-tiri-ku-teen u ahayn ee xaqiiqooyin dhab ah loo hayo oo ay ka mid yihiin dadkii arrimahan ka qayb-qaatay oo ka warramaya (dad shisheeye ah) iyo weliba sida Soomaalidu marti uga tahay inta arrimahan laga ogyahay oo ama Dawlado shisheeye ahi xogteeda haystaan ama hay’ado caalami ah iyo sida baahi deg-deg ah loogu qabo cilmi-baaris iyo raad-raac ay Soomaalidu leedahay. Waxaa kale oo aad loogu baahanyahay wacyi gelin heer kasta ah iyadoo si gaar ah shirku ugu jeeday Jaaliyadaha Soomaalida ee dibeddaha ku dhaqan iyo kaalinta fir-fircoon oo ay arrintan ka qaadan karaan iyo sidii ay weliba ugu ololayn lahaayeen iyo sidii warbaahinta Soomaalidu dadweynaha ugu baraarujinlahayd iyo weliba dadka siyaasadda ku jira oo ay laftoodu wax uga ogaanlahaayeen arrimahan maadaama ay iyagu Ummadda masuul ka yihiin iyo ilaalinta xuquuqdeeda. Arrintan oo aan aad looga sooci karin dhibaatooyin kale oo badan oo Ummadda Soomaaliyeed iyo Dalkoodaba la soo gudboonaaday ayaa in badan eersanaysa Dawlad la’aanta baahday iyo jahliga iyo dad yar oo dareenkii ka lumay danna aan ka lahayn degaanka iyo daryeelkiisa.
Iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaad mooddaa inaan dadka intiisa kalana ku baraarugsanayn dhibka arrintani leedahay. Ujeedooyinka shir-cilmiyeedkan loo agaasimay ayayna ka mid ahayd, aqoonn-is-weydaarsiga ka sokow iyo soo bandhigidda daraasadda ay samaysay Somali Center for Development Research, in dadka soomaaliyeed lagu baraarujiyo (awareness raising) cawaaqib xumada ay arrimahan iyo kuwa kale ee aan ka yaraysan sida xaalufinta badda iyo berrigaba ay msutaqbalka dhaw iyo kan dheerba u keenayaan Ummadda Soomaaliyeed iyo aayeheedaba.
Intaas kadib, nasiino yar kadib, waxaa bilowday su’aalihii iyo dood-wadaaggii oo loo furay marti sharaftii shirka ka soo qaybgashay, kuwaasoo dareenkooda aad ugu muujiyey sida ay uga maqsuudeen macluumaadkii ay ka kororsadeen, ugana xunyihiin dhibka na haysta, islamarkaasna soo jeediyey su’aalo badan iyo weliba talooyin aad wax ku ool u ah oo ay ka mid ahayd sidii jaaliyadaha dibedda oo ay horkacayaan Ururradooda iyo gaar ahaan aqoonyahanku ay ugu ololayn lahaayeen xuquuqda Ummadda Soomaaliyeed korna ugu qaadi lahaayeen wacyigooda.
Dadka qaar ayaa waxay isweydiiyeen sidee ku dhici kartaa in shisheeyuhu badaha soomaalida xaalufinayo oo khayraadkii badda la kala boobayo, si weliba aad u ba’an, islamarkaasna ay sun ka buuxiyaan? Waxay isweydiiyeen, armaa Soomaalida la rabaa inay dhulka iskaga soo qaxaan oo deedna qolo kale dhaxashaa? Armay jiraan qorshayaal inta ka weyn? Si kastaba, waxay u ekayd in inkastoo aan meesha laga saarin inay jiraan qorshayaal caalami ah dhulka iyo degaanka Eebbe ku manaystay Soomaalida asii dadkiisii ka gaabiyey (ama gabay?) la doonayo in lagaga intifaacsado si weliba aan sharciga caalamigaa waafaqsanayn oo dhac bareer ahi ku jiro (eeg boqolaalka markab oo xeebaha ku jira oo kalluumaysatadii soomaalidana iminka madaafiicda kula dagaallamaya) haddana waxaan shaki ku jirin in qorshayaasha Suntu yihiin bad iy berriba kuwa xaqiiqo cad loo hayo. Teeda labaadna, waxyaalihii aqoon-is-weydaarsigan lagu soo bandhigay ayaa waxaa ka mid ahaa khiyaamooyinka loo adeegsado arrimhan ay ka mid-tahay waxa loo yaqaan ‘mislabeling” oo tusaale ahaan kalluunka ama malaayga Soomaaliya laga soo jillaabto isagoo aalaaba la soo xaday aan lagu suuq-geyn inuu ka yimid badaha Soomaaliya ee meelo kale inuu ka yimid lagu qoro taasoo dadka suuqyada caalamka ka gadanayaa aanay wax shaki ah ku abuurayn.
Sidoo kale, waxaan meesha ka maqnayn in inta badan ay qolyaha Sunta ka dheefsada oo halkaas u waarida iyo kuwa badaha xaalufiyaa aan xiriir sidaasihi ka dhaxayn oo aan ka ahayn inay ka ahayn inay u bahoobeen ku-xad-gudubka xuquuqda Soomaalida iyo shuruucda caalamiga ahba. Waxaa intaas sii dheer in ashkhaasta iyo shirkadaha khiyaamooyinkan caalamiga ah maleegayaa aanay ahayn kuwo sidoodaba kala jecel arrimaha la xiriira wixii aan ka ahayn faa’iidada aan xadka lahayn oo ay dhibkan ka dheefayaan oo aysan wax xil ah iska saarin waxa loo yaqaan “moral and ethics” tiiyoo aysan jirin su’aalo baadan oo ay isweydiiyaan intaysan arrimahan ku dhaqaaqin. Tani waxay tilmaan u tahay inaanay xitaa haddii kuwa suntan badda ku shubaya iyo kuwa kuwa khayraadka badda xaalufinayaa isku mid ahaan lahaayeen ama xiriir lahaan-lahaayeen aysan wax farqi ah taasi ugu samayseen oo shacabka reer galbeedka oo ay ka soo jeedaan iyo kan African-kaba wixii dhib ah soo gaaraya ay kala weyntahaymarkasta faa’iidada dhaqaale ee xad-dhaafka ah ee ay ka soo xasilinayaan hal shixnad oo sun aha ama kahyraadka badda oo sharci darrada lagu boobayo ah.
Dood-wadaagii shirku intuu socday waxaa kale oo soo baxay arrimo runtii muhiima oo ay ka mid ahayd ka dib markii marti sharaftii madasha joogtay qaarkood oo dhawaan Soomaaliya ka soo noqday ay sheegeen arrimo ay ka mid yihiin:
In dhib weyn oo jiraa uu yahay dhaqaalo xumo iyo faqri dadka soomaalidaa so wajahay kaasoo keenaya tusaale ahaan inay adagtahay in kalluumaysatada lagu qanciyo badda ama xeebaha waa la baarayaa oo sun baa lagu shubay waayo waxay u arkayaan arrintaain ay halis galayso jiritaankoodu iyo noloshooda;
Taasi inay keentay, sida uu sheegay nin ka mid ah marti sharaftii madasha joogtay oo arrintaas isagu u soo joogey, in xitaa haddiiba ay yimaadaan ururro caalami ah oo ay daacad ka tahay inay baaraan arrimahan ay dhacdo in marar badan laga weeciyo meeshii suntu tiil ama iyadoo badda ka soo caariday lagu arkay taasoo loola jeedo in aan shaki la gelin fayada khayraadka halkaas lagaala soo baxo;
Dad badan sida la sheegay wax badan kama fekerayaan mustaqbalka dambe iyo aayaha jiilasha dambe ee maalintaas siduu qofkaasi wax ku soo geli lahaayeen ayaa la sheegay inay muhimadda koowaad siinayaan. Waa arrin aan sahlanayn oo xal mug-weyn oo dhinacyo badan u baahan (xag siyaasad iyo xag dhaqaalaba).
Si kastabase, iyadoo aan loo daymo la’ayn wel-welka dadka danyartaa ee ku nool waxay badaha kala soo baxaan, ayaan waxaan la dhayalsan karin dhibka weyn iyo aafooyinka arrimaahan ookale laga dhaxli karo. Sidoo kale, waxay u egtahay inaan kalluumaysatadaa danyartaa ee Soomaaliyeed aysan aad ula socon in adduunweynuhu ogyahay in badaha soomaaliyeed qashin-qub laga dhigtay oo weliba dawlado badani sir iyo xog badan ka hayaan oo aysan inta badan sheegayn.
Ugu dambayn Ururradii Soomaaliyeed oo madasha joogey waxay ballan qaadeen inay agenda-dooda ku darsanayaan dhibaatooyinkan iyagoo qaybta kaga aaddan ka qaadan doona.
Sidaas ayaana markay saacaddu ahayd 18.00 ama lixdii maqribnimo lagu soo gunaanaday shir-cilmiyeedkaas. Somali Center for Development Research waxaa ka go’an, ujeeddooyinka loo asaasayna ka mid ah, inay sii ambaqaaddo arrimaha cilmi-baarista oo istraatiijiga u ah danaha Ummadda Soomaaliyeed asii aan cid daryeelaysaa iminka muuqan iyadoo gacan laga geysanayo kor u qaadidda wacyiga Umadda (shacabka, Ururrada Bulshada, Xarumaha Waxbarashada, Siyaasiyiinta, iwm.) iyo sidii aqoonta iyo aqoonyahamiintu kaalintooda uga soo bixi lahaayeen, guud ahaan dhibaatooyinka Dalka iyo dadka Soomaaliyeed haystana u darsi lahaayeen, islamarkaasna talo aqoon ku salaysan uga soo saari lahaayeen taasoo ay adeegsan karaan hadba ciddii masiirka Umadda masuul ka ah heer kasta (Qaran, Gobol, Degmo, iwm.).
Macluumaad dheeri ah oo arrimahan la xiriira waxaa laga heli karaa:
Waraysi uu seminarka ka dib qaaday Radio Dalmar (Holland): ka dhegeyso halkan
Ama shabakada Somalitalk http://www.somalitalk.com/sun/
Wixii faah-faahin dheeri ah fadlan kala xiriir
Bashir M Hussein
Sawirada: Waxaa qaaday Radio Dalmar